Vidio ny Apple TV, 32GB sa 64GB? | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Apple tv, iPad
Androany dia namidy ny Apple TV. Ny boaty "set top top" vaovao avy any Apple dia tonga amin'ny fotoana voalohany miaraka amina fanaraha-maso roa azo atao arakaraka ny fitehirizana ananany. Ny ambiny amin'ny famaritana dia mitovy amin'ny maodely roa, fa ny fitehirizana dia tsy sombim-baovao izay tokony horaisintsika maivana, voalohany satria misy fahasamihafana € 50 eo amin'ireo maodely 32GB sy 64GB, ary faharoa satria tsy misy mety manitatra. aoriana, ka tsy maintsy jerena ny fanapahan-kevitra. Modely inona no hividy? Ampy ve ny Apple TV 32GB? Sa aleo mividy ilay 64Gb ho an'ny ampondra be, na mandeha izy na tsia?
Raha hampiasa ny Apple TV amin'ny ankapobeny ianao amin'ny famoahana atiny multimedia, na sarimihetsika, tantara mitohy na mozika, ary indraindray milalao lalao sasany na mametraka fampiharana, dia mety ho ampy ny fahafaha-32GB.
Raha, etsy ankilany, ny hevitrao dia ny mametraka lalao sy rindranasa maro dia tsara kokoa ny misafidy ilay 64GB. Ataovy ao an-tsaina fa rindranasa maro indray mandeha alaina no manohy misintona atiny fanampiny raha ilaina.
Ny lalao sy ny rindranasa ao amin'ny App Store ho an'ny Apple TV dia manana habe mihoatra ny 200MB. Fa raha vao sintonina ao amin'ny fitaovanao izy ireo dia afaka misintona atiny hatramin'ny 2GB. Ny habe faran'izay avo indrindra azon'ny fampiharana apetraka amin'ny fitaovanao dia 2,2GB. Raha mila misintona atiny bebe kokoa ianao raha vao mahatratra izany fetra izany dia tokony hamafa zavatra ianao raha te hisintona izay vaovao.
Ireo rindranasa misintona votoaty ho an'ny streaming playback dia tantanan'ny rafitra mivantana. Ireo atiny ireo dia alaina ao amin'ny Apple TV ahafahanao mijery azy ireo tsy misy fahatapahana, ary esorina arakaraka ny fitehirizana misy.. Amin'izany fomba izany, raha manana toerana malalaka betsaka ianao, ity atiny "on demand" ity dia mety tehirizina mba hahafahana mamerina azy avy hatrany avy eo, na raha mifanohitra amin'izany, lany ny tahiry maimaimpoana ianao, hamafa ny rafitra izany mba hanomezana toerana ho an'ny atiny hafa.
Raisina ireo angon-drakitra ireo, modely iza no ho fidinao? Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia hanana mihoatra ny ampy amin'ny maodely 32GB, Izay te hanova ny Apple TV ho foiben'ny lalao ihany no mety hanana fahaizana ambony kokoa. Efa tapaka ny fanapaha-kevitra: 32GB sisa tavela (na antenaiko).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Vidio ny Apple TV, 32GB sa 64GB?
Fakafakainay tsara ny Apple TV Generation faha-4 [Famerenana] vaovao
Tsindrio fotsiny ny Record Record ahafahanao mampifandray ireo memo feonao amin'ny iCloud